Modafinil - Nootropic အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူထိပ်တန်းမတ်မူးယစ်ဆေး | Steroid တစ်မျိုးအမှုန့် AASraw
Modafinil - Nootropic အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူထိပ်တန်းမတ်မူးယစ်ဆေး
/ဘ‌‌လော့ခ်/modafinil/Modafinil - Nootropic အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူထိပ်တန်းမတ်မူးယစ်ဆေး
အပေါ် Posted 12 / 15 / 2017 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် modafinil.
စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး 1.What ရှိပါသလဲ Modafinil 2.What ပါသလဲ
3.How Modafinil အလုပ်လုပ်? 4.Modafinil အသုံးပြုခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
5.Modafinil ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုနှင့်သောက်သုံးသော Armodafinil vs. Modafinil vs. 6.Adrafinil
7.Where အွန်လိုင်းစစ်မှန်သော Modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ?
| ။ Modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့် Nootropics အခြေခံဇာတ်ကောင်:
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 164-166 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်မှုကို Temp: +4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ Store က
အရောင်: အဖြူရောင် Crystal Powder
1.What များမှာ စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး ?
Nootropics, ဒါမှမဟုတ်မတ်မူးယစ်ဆေးဝါး, ကျောင်းသားများ, လုပ်ငန်းရှင်များ, အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေ, အားကစားသမားများ, ဖဲချပ်ဝေကစားသမားများနှင့်အိမ်ရှင်မများကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကိုအသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ သူတို့ဟာစွမ်းရည်ကိုသင်ယူမြှင့်တင်ရန်မှတ်ဉာဏ် function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, အာရုံနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ပင်နှုတ်နှင့်စာဖြင့်ရေးသားဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်လာဖို့ရန်အသုံးပြုကြသည်။
Modafinil 2.What ပါသလဲ
Modafinil တစ်ခုနိုးနိုးကွားကွား-မြှင့်တင် analeptic မူးယစ်ဆေး Cephalon Inc ကိုအားဖြင့်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက် FDA က (အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု) ကမူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်အတည်ပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မူလကအခြို့သောအိပ်စက်ခြင်းမမှန်ဆက်ဆံဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးနေစဉ်, ဒါကြောင့်တခါတရံတွင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်း၏မရှိခြင်းအားဖြင့်အာရုံချို့ယွင်းသူတစ်ဦးဘာသာရပ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့လူသိများသော "Smart မူးယစ်ဆေး" အဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်။
သင်တို့သည်လည်းကအမည်များကို Provigil, Sun က Pharma ဆေးဝါး Modalert, Alertec, Modapro နှင့် Modiodal အောက်တွင်ရောင်းချခဲ့မြင်ရလိမ့်မည်။
Modafinil မူလဆေးဝါးကုမ္ပဏီ Cephalon နဲ့ပေါင်းပြီးပြင်သစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပါမောက္ခမိုက်ကယ် Jouvet အားဖြင့် 1976 ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအတွက် hyperactivity စေမြင်ရ၏ပြီးနောက် 1986 အတွက် narcolepsy အဘို့စမ်းသပ်ကုသမှုအဖြစ်လူသားတွေအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အတွက်အသုံးပြုရမည့်အပေါ်သွားလေ၏။
ထိုအချိန်မှစ. Modafinil ၏အသုံးပြုမှုထိုကဲ့သို့သောပြောင်းကုန်ပြီ-အလုပ်အိပ်စက်ခြင်းရောဂါနှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်နှင့်ဆက်စပ်နာတာရှည်နေ့ခင်းဘက်အိပ်ကဲ့သို့သောအခြားအိပ်ပျော်ခြင်း-related အခြေအနေများ, ပေါ်သို့တိုးချဲ့ပါပြီ။
Modafinil လည်းနာမည်ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာနိုးစစ်သားစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်တက် 40 မှနာရီမြင့်မားမှာလည်ပတ်များအတွက်ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်စစ်တပ်ကအသုံးပြုသည်။ လေ့လာရေးကိုလည်းဦးနှောက်အပေါ်ရေတိုရေရှည်အိပ်စက်ခြင်းဟာဆင်းရဲချို့တဲ့မှုထိခိုက်သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းရေးမှာထိရောက်သောဖြစ် Modafinil စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပါပြီ။
ဤအကြောင်းကြောင့်, ကလေ့မဟုတ်ရင်အလုံအလောက်အိပ်စက်ခြင်းမရကြဘူးသူကိုအထူးသဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ရန် nootropic အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။
3.ဘယ်လို Modafinil အလုပ်လုပ် ?
ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် Modafinil ၏လုပ်ဆောင်ချက်အတိအကျယန္တရားများကိုမသိရှိပါ။ သုတေသနဒီဆေး Histamine, Dopamine, Epinephrine (Adrenaline), Norepinephrine (Noradrenaline), serotonin, နှင့် Orexin (Hypocretin) အပါအဝင်ဦးနှောက်နှင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသော neurotransmitters အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။
Modafinil ယူပြီးဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက် histamine အဆင့်ဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်နှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုမှမြင်ကြပြီ။ Modafinil ရဲ့ဆိုးကျိုးများသဘာဝအာရုံခံ histamine အာရုံစူးစိုက်မှုအားကောင်းတဲ့ inhibitor အားဖြင့်ကုန်ခမ်းခဲ့ပြီးတစ်ချိန်ကချွတ်ဝတ်ဆင်ပြသလျက်ရှိသည်။ ဒါကတန်ပြန် fluoromethylhistidine မှတူညီထုံးစံ၌တုံ့ပြန်မ methylphenidate လို့ခေါ်တဲ့အလားတူမူးယစ်ဆေးဝါး, တစ်ဦး histidine decarboxylase inhibitor ကိုဆက်သွယ်ပေးထားသည်။
Modafinil, တူညီတဲ့နာမတျော၏မူးယစ်ဆေးဝါး၏အဓိကတက်ကြွစွာအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော်လည်း, အပြည့်အဝကလည်ပတ်လမ်းကိုနောက်ကွယ်မှအပေါငျးတို့သအခြေခံမူထုတ်ဖေါ်နိုင်တယ်သောအတိုင်းအတာအထိသုတေသနပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ အများအပြားကလေ့လာမှုများကလူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် histamine ၏ CNS အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
ကြွက်အပေါ်ထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးဝါး orexinergic သည့်စနစ်သို့ယင်း၏လမ်းကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ Orexin တစ် neurotransmitter အဖြစ်ပြုမူခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်း / arousal ပြည်နယ်များရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်သတိဝီရိယ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းတစ်ဦး peptide ဖြစ်ပါသည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းသင့်လျော်သောအာရုံခံဆဲလျရှိကြကြောင်းစမ်းသပ်မှုဘာသာရပ်များသည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် orexin ၏အစွမ်းကုန်အရေးပါမှုကိုထုတ်ညွှန်ပြ, တုံ့ပြန်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
သုတေသနအတွက် Modafinil Dopamine နှင့်၎င်း၏အချက်ပြလမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်ဖို့မြင်ကြပြီ။ အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းနှင့်၎င်းတို့၏ neurotransmitters ကြည့်ရှုကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ Modafinil တစ် Dopamine reuptake inhibitor အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခြင်း, Dopamine Transporter ထိခိုက်ရှုမြင်ကြသည်။ လူ့လူနာ PET Scan ဖတ်သုံးပြီးတစ်ဦးအပိုဆောင်းလေ့လာမှုဦးနှောက်ထဲမှာ Dopamine ၏ Dopamine Transporter က်ဘ်ဆိုက်များ၎င်းပြင်အသုံးပြုပုံ Modafinil သိသိသာသာတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ကိုငါသိမြင်၏။
လေ့လာရေးအောင်မြင်စွာဒီမူးယစ်ဆေးများအသုံးပြုမှုများအကြားတစ်ဦးဆက်စပ်မှုကိုပြသခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်း၏မရှိခြင်းတူသောအချက်များဆန့်ကျင်နေတဲ့ကျန်းမာပြည်နယ်အတွက်သိမြင်မှု function ကိုဆက်ထိန်းထားပါပြီ။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးကိုလူ့စမ်းသပ်ဘာသာရပ်များအတွက် psychomotor function ကိုတစ်ခုတိုးတက်မှုမှ Modafinil ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
Narcolepsy, Shift-work အိပ်စက်ခြင်းရောဂါနှင့်အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်
Narcolepsy နိုးနိုးကွားကွားခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်း၏ထိန်းချုပ်မှုကိုသာသက်ရောက်တဲ့အာရုံကြောအခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ အခြေအနေကိုအလွန်အကျွံနေ့ခင်းဘက်အိပ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်, ပင်လူများကျပန်းမောဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်နေ့ကိုတလျှောက်လုံးအိပ်ပျော်နိုင်ပါတယ်။ အတော်ကြာဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်အချို့သောမျိုးရိုးဗီဇအချက်များနှင့်အတူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ link ကိုရှိပါတယ်ပေမယ့် narcolepsy ၏အတိအကျကိုအကြောင်းမရှိ, မသိနိုင်ပါဘူး။ ယင်းယန္တရား၏အစိတ်အပိုင်းသည်ဦးနှောက်အတွင်းရှိအာရုံကြောဆဲလ်လွှတ် orexin ၏ဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
မျိုးစုံကို double-မျက်စိကန်းသောရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled သုတေသနလေ့လာမှုများမှာတော့ Modafinil narcolepsy နှင့်အတူလူအတွက်နေ့ခင်းဘက်အိပ်လျှော့ချများအတွက်ထိရောက်သောကုသမှုဖြစ်မြင်ကြပြီ။ အကွိမျမြားစှာအိပ်စက်ခြင်း latency စမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်နိုးစမ်းသပ်ခြင်း၏ကို Maintenance အပေါ်ရမှတ်ကိုအလွန်ရလဒ်များအရအိပ်ယာကျော် Modafinil သုံးပြီးတိုးတက်နေကြသည်။ polysomnography သုံးပြီးစမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းစောင့်ကြည့်ညအချိန်အိပ်ပျော်ခြင်းအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ် Modafinil သုံးပြီးထိခိုက်မရတွေ့ရှိထားပါတယ်။
ကုသမှုပြတ်တောက်ပေါ်၌ narcolepsy လက္ခဏာတွေကုသမှုမခံမရသောအခါသူတို့၏အခြေခံအဆင့်ဆင့်မှလူနာအတွက်ပြန်လာရန်မြင်ကြခဲ့ကြသည်။ အဲဒီမှာအမ်ဖီတမင်းကဲ့သို့အခြားစိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူမြင်ကြဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေဖွံ့ဖြိုးဆဲလူများ၏အစီရင်ခံစာများခဲ့ကြပြီမဟုတ်နှင့်မှီခိုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စေပြဿနာဖြစ်မထင်ထားဘူး။ narcolepsy များအတွက် Modafinil ၏လေ့လာမှုများအတွက်အများဆုံးအစီရင်ခံဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုခေါင်းကိုက်ခဲ့သည်ကို၎င်း, အဆင့်ဆင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်အတူဖော်ပြခဲ့သည်ခဲ့ရာထက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးကြဘူး။
သုတေသီများထို့ကြောင့် Modafinil narcolepsy စီမံခန့်ခွဲခြင်းများအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းစွာသည်းခံကုသမှု option ကိုကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့ကြ, ထိုသို့အများဆုံးကဒီမူရင်းကုသမှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသော။ အခြားအအိပ်ပျော်ခြင်းမမှန်များအတွက်အသုံးပြုမှု, အပြင်အထူးသဖြင့် shift-အလုပ်အိပ်စက်ခြင်းရောဂါနှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ် / hypopnea syndrome ရောဂါစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။
Shift-အလုပ်အိပ်စက်ခြင်းရောဂါကလူသူတို့ကသာမန်ညအချိန်အိပ်စက်မှုကာလအတွင်းမှာအလုပ်လုပ်သောအလုပ်အကိုင်များရှိသည့်အခါဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian ရစ်သမ်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတစ်သမတ်တည်းအမျိုးမျိုးသောအလုပ်အကိုင်များသို့မဟုတ်သူတို့ကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းညဥ့်ဆိုင်းအလုပ်လုပ်ဖြစ်စေသည်တစ်လှည့်အချိန်ဇယားရှိသည်သောသူတို့၏အမျိုးအညဉ့်ကိုပြောင်းကုန်ပြီအလုပ်လုပ်သူတွေကိုနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောဆရာဝန်များအဖြစ်အလွန်ရှည်လျားသောအဆိုင်း, အလုပ်လုပ်သူကိုလူအခြို့တှငျတှေ့မွငျဖြစ်ပါတယ်။
ပြောင်းကုန်ပြီ-အလုပ်အိပ်စက်ခြင်းရောဂါအတွေ့အကြုံကိုအလွန်အကျွံနေ့ခင်းဘက်အိပ်ငိုက်နှင့်အတူလူ, narcolepsy လိုပဲ။ (နေ့အချိန်၌နေစဉ်အတွင်းဆိုလိုသည်မှာ) ပုံမှန်အိပ်စက်ခြင်းနာရီပြင်ပတွင်အိပ်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါထို့အပြင်သူတို့အိပ်မပျော်တွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ လူတွေရောဂါလက္ခဏာတွေသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်ထက်သာမန်အိပ်စက်ခြင်းပုံစံများမှပြန်လာနိုင်ကြသည်ဆိုပါက, သို့သော်ဒီလူအများစုတစ်ခု option ကိုမဟုတ်ပါဘူး။
တဦးတည်းလေ့လာမှုမှာတော့ပြောင်းကုန်ပြီ-အလုပ်အိပ်စက်ခြင်းရောဂါလူနာသူတို့ရဲ့ဆိုင်းမတိုင်မီ 200 Modafinil ၏မီလီဂရမ်သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာဖြစ်စေပေးထားခဲ့ကြသည်။ တစ်သတိဝီရိယစမ်းသပ်မှုအပေါ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့်အခါ Modafinil နဲ့ကုသလူနာအာရုံစူးစိုက်မှုလြော့နညျးသှား၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ကြာချိန်အတွက်လျော့ချရေးရှိသည်ဖို့မြင်ကြခဲ့ကြသည်။ အချိန်အိပ်အောင်းနေချိန်များတွင်တစ်ဦးကကျိုးနွံတိုးတက်မှုကိုလည်းမြင်ရ၏။
သို့သော်ထိုအတိုးတက်မှုရှိနေသော်လည်းလူနာညအချိန်တွင်အချို့သောအလွန်အကျွံအိပ်ခြင်းနှင့်ချို့ယွင်းစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်ဖို့ဆက်ပြောသည်။ သုတေသီများဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေဆဲ ပို. ပင်ထိရောက်သောကုသမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလိုအပ်သောကြောင်းဖြစ်ပေါ်သောဤကျန်နေတဲ့အိပ်၏ကပြောသည်ပါပြီ။
ပိတ်ဆို့ခြင်းအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ် / hypopnea syndrome ရောဂါ (OSAHS) ကိုနှုတ်၌လျှာနှင့်ပျော့ပျောင်းသောအာခေါင်ထောက်ပံ့ကြွက်သားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်လုံးဝပိတ်ဆို့ခံရရန်လေကြောင်းအနားယူနှင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည့်အခါဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အလားအလာလေးနက်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ hypopnea နှေးကွေးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေကြောင်းအဆီးအတားနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်ကြောင်းရေတိမ်ပိုင်းအသက်ရှူဖို့ကိုရည်ညွှန်းနေစဉ်တွင်အသက်ရှူကျပ်, စုစုပေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်မျှမတို့အသက်ရှူ၏ကာလကိုရည်ညွှန်းသည်။
အိပ်ပျော်နေသောနေစဉ်အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်ရောဂါလက္ခဏာများအသံကျယ်ဆိုးဆိုးရွားရွားဟောက်တတ်တဲ့ပါဝင်သည်ခြောက်သွေ့ပါးစပ်နှင့်လည်ချောင်းနာ, နံနက်ခေါင်းကိုက်ခြင်း, အလွန်အကျွံနေ့ခင်းဘက်အိပ်နှင့်အတူနိုးထ, မွန်းကျပ်နှိုးထ, အသက်ရှူချုပ်ရာ၏ကာလကိုလေ့လာသည်။
Modafinil ထို့ကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်ရောဂါကုသမှုအတွက်တစ်ခုတွဲဖက်ကုထုံးအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုကြိုးစားကုသသည့်ရောဂါ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲမကြာခဏကြောင့်ညအချိန်တွင်ဒုက္ခအသက်ရှူခြင်းကြောင့်နှောင့်အယှက်အိပ်စက်ခြင်းပုံစံများမှဖြစ်ပေါ်သောနေ့ခင်းဘက်အိပ်တိုးတက်လာဖို့မှမဟုတျပါဘူး။ အကွိမျမြားစှာကို double-မျက်စိကန်းသောရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled သုတေသနလေ့လာမှုများ Modafinil သိသိသာသာရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ်နေ့ခင်းဘက်အိပ်တိုးတက်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။
Attention Deficit ရောဂါ & အာရုံစူးစိုက်မှု-Deficit Hyperactivity ရောဂါ
Modafinil ၏အသုံးအများဆုံး Off-တံဆိပ်အသုံးပြုမှုတစ်ခုမှာ Attention Deficit ရောဂါ (ADD) နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု Hyperactivity ရောဂါ (ADHD) အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ လူအတော်များများကြောင့်ထိုသို့ပြုထားပြီးအဆိုပါလှုံ့ဆော်အကျိုးသက်ရောက်မှုဤအခြေအနေများအဘို့အ Modafinil ကိုအသုံးပြုပါ။ အတော်များများကအသုံးပြုသူ ADHD များအတွက် Modafinil သုံးပြီးသူတို့ကိုလှုံ့ဆော်မှုနေဖို့ကူညီပေးသည်နှင့်လက်မှာတာဝန်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြောင်းအွန်လိုင်းပြည်နယ်သုံးသပ်ပြီး။
အခြားအပြန်လည်သုံးသပ်လည်း Modafinil အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုလေးနက်အနုတ်လက္ခဏာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ (ဥပမာစိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါ) ထိုသို့သော Adderall, Ritalin, dextroamphetamine နှင့် dexmethylphenidate အဖြစ်ရိုးရာဆေးဝါးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြပါဘူးကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
အကွိမျမြားစှာသုတေသနလေ့လာမှုများလူကြီးများအတွက် ADHD စီမံခန့်ခွဲရန် Modafinil သုံးပြီးစုံစမ်းပြီ။ အခြားသူတွေရလဒ်များအရအိပ်ယာမှ Modafinil နှင့်သမားရိုးကျဆေးဝါးများနှစ်ဦးစလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်စဉ်တချို့ကလေ့လာမှုများ, ရလဒ်များအရအိပ်ယာမှ Modafinil နှိုင်းယှဉ်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအသမရိုးကျမူးယစ်ဆေး dextroamphetamine နှိုင်းယှဉ် Modafinil ၏ထိရောက်မှုကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ တက်ကြွစွာဆေးဝါးများဖြစ်စေယူတဲ့သူလူနာရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာသိသိသာသာ DSM-IV ADHD စာရင်းအပေါ်ရမှတ်များတိုးတက်ကြမြင်ကြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါသုတေသီများ Modafinil ဆေးပြား ADHD နှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူများတွင်သမားရိုးကျစိတ်ကြွဆေးဖို့အလားအလာအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦးကကို double-မျက်စိကန်း Random, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled crossover လေ့လာမှု Modafinil တစ် 200 မီလီဂရမ်ထိုးကျန်းမာလူနာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ ADHD နှင့်အတူလူနာအတွက်သိမြင်မှုတိုးမြှင့်တစ်အလားတူပုံစံထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါသုတေသီများ Modafinil ရိုးရာစိတ်ကြွဆေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ ADHD တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာကုသမှုကုထုံးအဖြစ်အလားအလာရှိကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့သည်။
ADHD များအတွက်ကလေးငယ်များအတွက် Modafinil ၏အသုံးပြုမှုဤအချိန်တွင်အကြံပြုသည်မဟုတ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအပါဝင်သူများထဲမှတစ်ဦးအသေးအရေအတွက်အချို့လေးနက်အနုတ်လက္ခဏာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူအဆုံးသတ် ADHD နှင့်အတူသားသမီးများအတွက် Sparlon ကိုခေါ် Modafinil တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်မြင့်မားထိုးပုံစံကိုသုံးပြီးပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
Stevens-Johnson က syndrome ရောဂါအရေပြားနှင့်ချွဲအမြှေးပါးများရှားပါးခြင်းနှင့်လေးနက်သောရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အဓိကရောဂါလက္ခဏာတွေအဖျား, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်, ကျယ်ပြန့်အသားအရေနာကျင်မှု, အနီရောင်သို့မဟုတ်ခရမ်းရောင်ပျံ့နှံ့ဖုနှင့်, ချွဲနှုတ်တော်အမြှေးပါး, နှာခေါင်း, မျက်စိနှင့်လိင်အင်္ဂါပေါ်တွင်အရည်ကြည်ဖုဖြစ်ကြသည်။
ထိုကာလကတည်းကအကွိမျမြားစှာလေ့လာမှုများသို့သော်ဤအုပ်စုတွင်အသုံးပြုရန်အတည်ပြုသည်မဟုတ်, ADHD များအတွက်ကလေးငယ်များအတွက်သုံးပါ Modafinil ၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုပြသခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် Modafinil လက်ရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် ADD သို့မဟုတ် ADHD ဆက်ဆံဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ် FDA ကအတည်ပြုသည်မဟုတ်, နှင့်ပိုပြီးသုတေသနပြုနေဆဲကဤပုံမမှန်အပေါ်အပြည့်အဝသက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်နဲ့အကွိမျမြားစှာ Sclerosis (MS) တွင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏လက္ခဏာများ
နာတာရှည်စိတ်ကျရောဂါနဲ့ဆက်စပ်အများဆုံးအစီရင်ခံလက္ခဏာတွေတစ်ခုမှာပင်ပန်းနွမ်းနယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်မှအောင်မြင်စွာရွေးချယ် serotonin Reuptake inhibitors (SSRIs) ကဲ့သို့သောသမားရိုးကျစိတ်မကျဆေး Antidepressants နဲ့ကုသနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်ဆက်စပ်သည်အခြားရောဂါလက္ခဏာတွေအတွက်တိုးတက်မှုရှိခြင်းခံရကြသူလူနာများကိုအတွက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံအိပ်နေတုန်းပဲဆက်လက်ရှိနိုငျပါသညျ။
ထို့အပြင်အချို့သောလူနာကိုတုံ့ပြန်ကြဘူးအဖြစ်သမားရိုးကျဆေးဝါးလိုနှင့် Modafinil နှင့်အတူသူတွေကိုစိတ်မကျဆေး Antidepressants များ၏ပေါင်းစပ်အချို့ကိစ္စများတွင်အလုပ်မြင်ကြပြီ။
အကွိမျမြားစှာကို double-မျက်စိကန်းသောရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှုများသာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစိတ်ကျရောဂါများအတွက်ရိုးရာ SSRI ကုသမှုကိုတုံ့ပြန်ရန်သူပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်အိပ်နှင့်အတူလူနာအတွက် Modafinil တိုးပွားကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။ သုံးသီးခြားပေမယ့်အလားတူလေ့လာမှုများမှာတော့ Modafinil တစ်ယောက်တည်း SSRIs တုံ့ပြန်သို့မဟုတ် nonresponders တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နှင့်သောလူနာများတွင် SSRI စိတ်မကျဆေး Antidepressants နဲ့တွဲဖက်ကုသမှုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အားလုံးသုံးစမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့ Modafinil သိသိသာသာကာလတိုအတွင်းလူနာအတွက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်အိပ် (ထက်နည်း6ရက်သတ္တပတ်) တိုးတက်စေရန်ရှုမြင်ကြသည်။ အဆိုပါသုတေသီများ Modafinil စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူအချို့သောလူနာပင်ပန်းနွမ်းနယ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်အတူအထူးသဖြင့်သူတို့အဘို့တစ်အသုံးဝင်သောတွဲဖက်ကုသမှုဖြစ်နိုင်သည်ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူလူနာတွင်တွေ့မြင်အဖြစ်, အကွိမျမြားစှာ Sclerosis နှင့်ဆက်စပ်အသုံးအများဆုံးလက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခုပင်ပန်းနွမ်းနယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်သုတေသနသို့သော်အဘယ်သို့ပြုထားပြီးအလားအလာဖြစ်ပါတယ်, ဒီအခြေအနေနှင့်အတူလူနာအပေါ်ပြုမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာမှုတစ်ခုက MS နှင့်အတူလူနာအတွက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြင်းထန်မှုတိုးတက်အောင်အတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာမှ Modafinil နှိုင်းယှဉ်တဲ့ Single-မျက်စိကန်း, အဆင့်2နှစ်ခုအလယ်ဗဟိုလေ့လာမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလူနာပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ် 1-2 များအတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေးခဲ့, ထို့နောက် 2003ရက်သတ္တပတ် 4-400 များအတွက် Modafinil ဆေးပြား mg, ပြီးတော့ရက်သတ္တပတ် 5-6 ပြန်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ, ရက်သတ္တပတ် 7-9 များအတွက် Modafinil ဆေးပြား MG ။
အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးသင်တန်းသားများ၏ဘေးကင်းမှုသေချာစေရန်ကုသမှုမျက်စိကန်းကြဘူး။ ဘက်မလိုက်ရလဒ်များကိုသေချာစေရန်, ကုသမှု၏ထိရောက်မှုအဓိကစမ်းသပ်မှုပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြင်းထန်မှုစကေး (FSS) ဖြစ်ခြင်း, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အကြေးခွံကိုအသုံးပြုပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်နေ့ခင်းဘက်အိပ်သိသိသာသာ 200 မီလီဂရမ် Modafinil ထိုးနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှစ်ဦးစလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ Modafinil ၏ 400 မီလီဂရမ်ထိုး, သုံးပြီးတိုးတက်ခဲ့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါသုတေသီများမြင့် 400 မီလီဂရမ်သောက်သုံးသောအဆိုပါ 200 နှင့်အတူမြင်ပြီတိုးတက်မှုကြောင့်သည်းခံစိတ်သို့မဟုတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်အပေါ်မဆိုဖြစ်နိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေ Install လုပ်နိင်ကြောင်းတတ်နိုင်သမျှထိုး-related ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုမှပါပြီစေခြင်းငှါနိဂုံးချုပ်, သောက်သုံးသော MG ကိုထိန်းသိမ်းရန်မပြုခဲ့ဘယ်ကြောင့်မရှင်းလင်းခဲ့ဟုဆိုသည်။
ယေဘုယျအားသုတေသီ Modafinil က MS နှင့်အတူလူအတွက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်အိပ်တိုးတက်အောင်များအတွက်ကောင်းစွာသည်းခံမှုနှင့်ထိရောက်သောကုသမှုဖြစ်နိုင်သည်ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
Modafinil ၏အသုံးအများဆုံး Off-တံဆိပ်အသုံးပြုမှု၏အချို့သိမြင်မှုတိုးမြှင့်များအတွက် nootropic မူးယစ်ဆေးအဖြစ်မူးယစ်ဆေးသုံးပြီးဖြစ်ကြသည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့်က Wall Street ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေမှလုပ်ငန်းရှင်များဖို့အမျိုးမျိုးသောလူတွေမှတ်ဉာဏ်, သင်ယူမှု, အာရုံနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကို span တိုးတက်လာဖို့ Modafinil ကိုအသုံးပြုပါ။
ယခင်သုတေသနလေ့လာချက်များ၏တွေ့ရှိချက်များဆန်းစစ်တစ်ခုမှာပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှု Modafinil အထူးအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် Episode မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှုကိုအောက်ပါအတွက်တိုးတက်မှုပြတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ်သုံးသပ်ချက်ကိုခက်ခဲပြီးရှုပ်ထွေးတာဝန်များကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်ကွပ်မျက်အထူးသဖြင့်အခါ, Modafinil အဓိကအားအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုနှိုင်းယှဉ်သိမြင် function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့သည်။
တဦးတည်းကို double-မျက်စိကန်းတို့အကြား-ဘာသာရပ်များသုတေသနလေ့လာမှု Modafinil ကျန်းမာအရွယ်ရောက်ယောက်ျားအပေါ်ရှိခဲ့ပါတယ်သက်ရောက်မှုတိုးမြှင့်အလားအလာသိမြင်ကြည့်ရှု။
ဒါဟာ Modafinil အမြင်အာရုံပုံစံအသိအမှတ်ပြုမှု, Spatial စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ရပ်တန့်-signal ကိုတုံ့ပြန်မှုစမ်းသပ်မှုအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသော neuropsychological စမ်းသပ်မှုအပေါ်သိသိသာသာမြှင့်တင်ရန်အတွက်သင်တန်းသားများကို performance ကိုအသုံးပြုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြောင်းပြန်အချို့စမ်းသပ်မှုကိုတုံ့ပြန်ရန် Modafinil Impulse တားစီးကိုကူညီခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်မှုတိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးတက်စေခြင်းအလိုငှါအကြံပြုခြင်း, ယုတ်လျော့ခံရဖို့ကိုတှေ့မွငျခဲ့သညျ။
အလားတူပင်အွန်လိုင်း nootropic ဖိုရမ်များတှငျတှေ့အသုံးပြုသူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းငှါ, လေ့လာမှုမှာပါဝင်သူ Modafinil အပေါ်ပိုပြီးတပ်လှန့်ခြင်းနှင့်စေ့စေ့နားထောင်ခံစားနှင့်တိုးတက်လာသောစွမ်းအင်အဆင့်ဆင့်ရှိခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။
ပိုများသောသုတေသန Modafinil သိမြင်မှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေရန်ကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်ရှိစေခြင်းငှါဆုံးဖြတ်ရန်သက်ရောက်မှုများကိုအပြည့်အဝအားဤဧရိယာ၌လိုအပ်သည်။
Modafinil ညွှန်ကြားအဖြစ်အသုံးပြုသည့်အခါမျှမအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူလုံခြုံဖြစ်စဉ်းစားသည်။ သငျသညျပုံမှန်အသုံးပြုမှုသင်တန်းကာလအတွင်းကြုံတွေ့ရရသောအချို့ပျော့ Modafinil ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သတိထားဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများမှတဆင့်သုတေသီများ Modafinil ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်သည့်အလားအလာဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများကအောက်ပါစာရင်းသတ်မှတ်လိုက်တဲ့:
Rhinitis ကို (နှာခေါင်း mucosa ရောင်ခြင်း)
Modafinil ၏ပိုရှားပါးပေမယ့်လေးနက်အလားအလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏တချို့ကယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ Stevens-Johnson က syndrome ရောဂါ, eosinophilia နှင့်စနစ်တကျရောဂါလက္ခဏာ (Dress) နဲ့ဆေးဝါးတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အဆိပ်သင့် Epidermal Necrolysis (ဆယျ) အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားသောအသားအရေအဖုများနှင့်တုန့်ပြန်ဖြစ်ကြသည်။
Modafinil ဆေးပြားယူနေစဉ်အတွင်းသင်တို့သည်ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဆိုကြုံတွေ့ရပါလျှင်, သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ သင်ဤဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်သုံးစွဲဖို့လိုပါလျှင်တစ်ဦးဆေးညွှန်းအဘို့သင့်ဆရာဝန်ကိုမေးသို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးဆေးညွှန်းမရှိဘဲသင်၏တိုင်းပြည်တွင်အွန်လိုင်း Modafinil ကိုဝယ်ခြင်းငှါထိုက်ခွင့်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။
On-တံဆိပ်များများအတွက်အသုံးပြုသည်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ, Modafinil ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နေ့လျှင် 200 မီလီဂရမ်၏ဆေးများမှာသတ်မှတ်ထားသည့်ဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံမှာ 100 တစ်အောက်ပိုင်းထိုးတစ်နေ့လျှင် MG ကိုစတင်အသုံးပြုသည်, အဲဒီနောက်သောက်သုံးသော 200 မှတိုးပွါးစတင်ရန်အပြည့်အဝထိုးဖို့အထိခိုက်မခံစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်တဖြည်းဖြည်း MG ။
Off-တံဆိပ်များများအတွက် Modafinil ဘို့အကြံပြုဆေးညွှန်းအဘယ်သူမျှမလေ့ရှိပါတယ်များကိုအသုံးပြုကြသည်။ လူအများစုဟာ 200 တစ်နေ့လျှင် MG ပုံမှန်အားဖြင့်ပတ်လည်သတ်မှတ်ဆေးညွှန်းဆင်တူဆေးညွှန်းအတိုင်းလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးသငျသညျကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါအတိအကျသိနိုင်အောင်သင်ပထမဆုံးသောက်သုံးသောယူမှီက Modafinil ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများကိုဖတ်ရှုဖို့ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆဖြစ်ပါတယ်။
6.Adrafinil vs. Modafinil vs. Armodafinil
Adrafinil ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အသုံးပြုမှုအတွက် Modafinil ရန်အလွန်ဆင်တူသည်တစ်ဦးဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ခုဒြပ်ပေါင်းများကိုမော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံအတွက်အလွန်ဆင်တူပါ၏ ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက် Modafinil Adrafinil ရှိပါတယ်တစ်ခုကြားတွင်ဟိုက်ဒအုပ်စုတစ်စုချို့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
Adrafinil Modafinil တစ် prodrug အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဤသည်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် Modafinil မှပြောင်းပေးတာကိုဆိုလိုတယ်, ပြီးတော့အလားတူထုံးစံ၌ဆောင်ရွက်သည်။ Adrafinil အမှန်တကယ်ပထမဦးဆုံး Modafinil ရှာဖွေတွေ့ရှိသောတူညီဆေးဝါးကုမ္ပဏီက 1974 အတွက်နှစ်နှစ်ကြိုတင် Modafinil မှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ Modafinil သို့ကူးပြောင်းရန်လိုအပ်ပါသည်သောကြောင့်, Adrafinil Modafinil ကဲ့သို့အစွမ်းထက်မဟုတ်ပါဘူး။ မ Adrafinil ၏ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမူးယစ်ဆေးတစ်ခုထိုးထဲမှာ, Modafinil သို့ကူးပြောင်းပါလိမ့်မည်အများစုသည်မလှုပ်မရှား modafinilic အက်ဆစ်သို့ကူးပြောင်းသည်။
Modafinil နည်းပညာပိုင်းတစ် 1 ဖြစ်ပါသည်: နှစ်ခု enantiomers, R-Modafinil နဲ့ S-Modafinil ၏ 1 ပေါင်းစပ်။ Enantiomers တူညီတဲ့ဒြပ်ပေါင်းများ၏မှန် image ကိုဗားရှင်းများမှာ; ထိုကြောင့်သူတို့သည်တူညီသောမော်လီကျူးအစိတ်အပိုင်းများရှိသည်, ရုံဖွဲ့စည်းပုံကွဲပြားခြားနားသည်။
၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တွင်, Modafinil များ၏ R ကို enantiomer Armodafinil အဖြစ်လူသိများသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အမျှ Armodrafinil အမည်ရအိပ်စက်ခြင်းပုံမမှန်ခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံအိပ်နှင့်အတူလူအတွက်နိုးနိုးကွားကွားတိုးတက်အောင်, Modafinil ကဲ့သို့တူညီသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ Armodafinil ၏ဝက်ဘဝအချို့ကိစ္စများတွင်ပိုမိုထိရောက်သောစေနိုငျသော, ရှည် Modafinil ထက်ဖြစ်ပါတယ်။
Armodafinil ၏လူကြိုက်အများဆုံးနာမကိုအမှီအမှတ်တံဆိပ်ဗားရှင်းလည်း Modafinil ၏လူကြိုက်အများဆုံးအမှတ်တံဆိပ်အမည်အားဗားရှင်းကိုထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ Cephalon ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Nuvigil ဖြစ်ပါသည် - Provigil ။
7.Where မှ အွန်လိုင်းစစ်မှန်သော Modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ် ?
သင်အွန်လိုင်းအများအပြား Modafinil အမှုန့်အရင်းအမြစ်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, သို့သော်စစ်မှန်သော Modafinil ကုန်ကြမ်းအွန်လိုင်းဝယ်ယူရန်ခက်ခဲသည်။ စျေးကွက်မှာအတုထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်းအများအပြားသတင်းရင်းမြစ်ရှိပါတယ်။ သင်အွန်လိုင်း Modafinil ကုန်ကြမ်းမဝယ်တဲ့အခါမှာဒါသငျသညျတခုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် realiable အရင်းအမြစ်.
Tags: modafinil ကုန်ကြမ်းဆိုးကျိုးများ
4073 Views စာ
Modafinil: ငါဘယ်လို Modafinil အမှုန့်ကိုယူသင့်သနည်း
သင်သိသင့်ပါတယ်တစ်ဦးကပူအရောင်းရဆုံးစမတ်မူးယစ်ဆေး: Modafinil အမှုန့်ကိုဝယ်!
ကြောင်း Modafinil ယူပြီးပြီးနောက်ကောင်းစွာ brainpowder အလုပ်တိုးမြှင်တကယ်လား?
Anavar ယောက်ျားမိန်းမတို့အသုံးပြုတဲ့အကောင်းဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်း Steroid တစ်မျိုးတစ်ခုဖြစ်သည်	levitra ပိုမိုထိရောက်စေရန်မည်သို့